वि’वाह भएपछि यु’वतीहरु मो’टाउनुको खास कारण यस्तो रहेछ? – Kavrepati
Home / समाचार / वि’वाह भएपछि यु’वतीहरु मो’टाउनुको खास कारण यस्तो रहेछ?
admin September 25, 2021	समाचार Leaveacomment 127 Views
हाम्रो समाजमा यी यस्ता घटनाहरु प्राय देखिरहेका नै हुन्छौ जहा मोटो मान्छेलाई कति मोटो भन्ने अनि जो दुब्लाृे छ त्यस्तालाई लुरे भनेर जिस्काउने । दुव्लो भएका यु’वा यु’वती वि’वाह पछि मोटाएका हामीले धेरै देखेका छौं । अझ साथी भाईहरुबीच त बि’हेपछि त मोटाइस् नी भन्ने प्र’तिक्रिया दिने गरिएको सुनिन्छ ।
वि’वाहपछि किन मोटाउछन् त पातला मानिस यसबारे अनु’सन्धान भइरहेको छ । फेमिली सिस्टम एण्ड हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित एक अनु’सन्धानका अनुसार ‘विवाह पछि थुप्रै म’हिला र पु’रुषको तौल तेज रुपमा बढ्ने गर्दछ । यस्तै एक अन्य अनु’सन्धानका अनुसार वि’वाहको ५ वर्ष भित्र ८२ प्रतिशत जोडीको तौल ५ देखि १० किलो बढ्ने गर्दछ ।
विशेषज्ञका अनुसार तौल बढ्नुमा हाम्रो परिवर्तित जीवनशैली र बडी चेन्ज नै हो । विवाह पछिको परिवर्तित दैनिकी र जीवनशैलीका कारण शरिरमा थुप्रै हर्मोनल चेन्ज हुने गर्दछ । यो तौल बढाउनका लागि जि’म्मेवार हुनसक्छ । यस्तै विवाह पछि व्यस्त समय तालिकाका कारण थुप्रै मानिसहरु पर्याप्त निदाउन पाउँदैनन् ।
अध्ययनका अनुसार दैनिक ७ ८ घण्टा राम्रोसँग नसुत्दा शरिरको मेटाबोलिजम कम हुने गर्दछ । जसले तौल बढ्ने गर्दछ । वि’वाह पछि जीवनमा आएको प’रिवर्तनका कारण मानिसहरु तनावमा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा भोक बढाउने हर्मोनको लेभल बढ्ने गर्दछ जसले तौल बढ्ने गर्दछ ।
मानिसहरु वि’वाह पहिले राम्रो देखिनका लागि आफ्नो डाइट र फिटनेसमा पूरा ध्यान दिने गर्दछन् तर विवाह पछि जीवनशैलीमा परिवर्तन हुने भएका कारण यस्ता कुराहरु छुट्ने गर्दछ जसले तौल बढ्छ । एक्लै हुँदा आफूलाई फिट राख्नका लागि पर्याप्त समय निकाल्न सकिन्छ तर विवाह पछि प्राथमिकता परिवर्तन हुन्छ ।
मानिसहरु व्यायमको लागि समय निकाल्न सक्दैनन् । शा’रिरिक रुपमा निष्क्रिय हुने भएका कारण तौल बढ्ने गर्दछ । आजकाल धेरैजसो मानिस २८–३० वर्षमा सेटल भएपछि वि’वाह गर्दछन् । जबकी अध्ययनका अनुसार ३० वर्षपछि हाम्रो शरिरको मेटाबोलिजमको रेट कम हुन्छ जसका कारण तौल बढ्छ ।
वि’वाह पछि हनिमुन जाँदा बाहिरको खाना साधारण हुन्छ । यसका साथै धेरैजसो जोडी विकेन्ड र आउटिंग भन्दै बाहिर खाना खान रुचाउँछन् । यी हाइ क्यालोरी खाना तौल बढाउनको लागि जि’म्मेवार हुन्छन् । विवाह पछि आफन्तकोमा जानु पर्ने रितिरिवाज हुन्छ जहाँ धेरैजसो हेभी खाना हुने गर्दछ । धेरै जोडीको खाना खानको लागि निश्चित समय पनि हुँदैन । यसले तौल बढ्छ ।एजेन्सी
Previous पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असोज ९ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Next गायिका इन्दिरा जोशीसँग इंगेज्मेन्ट गर्ने को हुन् शरद केडिया ?